Marin ၏လူထုမီဒီယာစင်တာသည် Nonprofit Marin TV တွင်ကိုဘော့ဒီဂျစ်တယ်ကူးပြောင်းမှုကိုအသုံးပြုသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အကျိုးအမြတ်မယူသော Marin တီဗီမှာ Marin အသုံးချဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် Cross-Converter ၏အဝန်း Media Center ကို
အကျိုးအမြတ်မယူသော Marin တီဗီမှာ Marin အသုံးချဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် Cross-Converter ၏အဝန်း Media Center ကို
Champaign က, မကျန်းမမာ - ။ မတ်လ 29, 2017 - ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် ယနေ့ Marin ၏အဝန်းမီဒီယာစင်တာ (CMCM), Marin တီဗီ၏အော်ပရေတာ၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောဝင်လာသောအစီအစဉ်များကိုအရောအနှောအပေါ်ထွက်ကစားစေရန်တစ်ဦးကိုဘော့ပေးဖို့ BBG-1002-UDX stand-alone Cross-converter ကိုသုံးပြီးကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် HD အင်တာနက်ထုတ်လွှင့်လမ်းကြောင်းများနှင့် SD က cable ကို channel များကိုမှန်ကန်သောရုပ်ပုံကို formats ထိန်းသိမ်းနေစဉ်။ CMCM ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ, မီဒီယာသင်တန်းပေးခြင်းနှင့်ကေဘယ်လ်တီဗီနှင့်အွန်လိုင်းမီဒီယာများအတွက်မူရင်းအကြောင်းအရာဖန်တီးရန်နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဂျစ်တယ် tools တွေကိုလက်လှမ်းမီနှင့်အတူ Marin County မှာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၏နေထိုင်သူများပေးမယ့်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Marin တီဗီ Marin County ရဲ့ရယူထားရတာအသိုင်းအဝိုင်းအစု, ပညာရေးနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော cable ကိုလမ်းကြောင်းများဖြစ်ပါတယ်။
"ကုန်ကျစရိတ်အမြဲတမ်းပေးဖို့ BBG-1002-UDX CMCM များအတွက်အထူးသဖြင့်ကောင်းသောဖြေရှင်းချက်ဖန်ဆင်းသောအကျိုးအမြတ်မယူရုပ်မြင်သံကြားပရိုဂရမ်မာတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်" ဟုသောမတ်စ် Walsh, မီဒီယာထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များ, အဆိုပြုထားခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်သောကုမ္ပဏီ၏ CEO ကပြောသည် ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် ဖြေရှင်းချက်။ "ဒီပေးဖို့ BBG-1002-UDX အနေနဲ့တတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာထုတ်လွှင့်နေတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်-တန်း, ခြွင်းချက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူဘက်စုံသုံးပြောင်းလဲခြင်းဖြေရှင်းချက်ပေးသည်။ "
CMCM (အမွေစံ-ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မှု (SD) အစီအစဉ်များနှင့်အသစ်သော high-definition တစ်ခုရောနှောပြန်ကစားHDလေးရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများမှ 23 ကွဲပြားခြားနားသောသတင်းရင်းမြစ်ထံမှ) ဗီဒီယိုဖိုင်များကို။ CMCM လည်းအများအပြားပြင်ပမှာရှိတဲ့ကြာ ဂြိုဟ်တု နှင့်ဒေသတွင်းပရိုဂရမ်နှစ်ခုစလုံးကို SD ကအတွက် feeds နှင့် HD။ အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်၏အတော်များများယခင်ကထဲကနေပြောင်းလဲပြီ HD အနက်ရောင်ပြောင်းလဲခြင်းထိပ်ပေါ်မှာအရက်ဆိုင်, အောက်ခြေဒါမှမဟုတ်ပုံနှစ်ဖက်နှင့်အတူ, SD ကသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ရန်။ CMCM ရောထွေးကို formats နှင့်ဖိုင်များ၏သတင်းရင်းမြစ် ယူ. မှန်ကန်စွာပေါ်သူတို့ကိုထွက်ကစားရန်ချန်နယ်တစ်ခုစီ၏ output အပေါ်ပေးဖို့ BBG-1002-UDX ကိုအသုံးပြုသည် HD နဲ့ SD လိုင်းများ, အနက်ရောင်ဘားမပါဘဲနှင့်ဆန့်ဖျစ်ညှစ်, ဒါမှမဟုတ်ပုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲ။
တုံ့ပြန်ရန်သုံးမှလေးစက္ကန့်မလိုအပ်သည့်အများဆုံး converters အဖြစ်, မတူဘဲ, အပေးဖို့ BBG-1002-UDX အလွန်လျင်မြန်စွာကြောင့်အချိန်အနည်းငယ်ဘောင် '' ကျိုးနပ်အတွက်အလိုရှိသော output ကိုရန် input ကို convert နိုငျသော input ကို format ကိုအသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါ။ အဆိုပါပေးဖို့ BBG-1002-UDX သည့် input ကိုအရင်းအမြစ်အစီအစဉ်များအပေါ် AFD codes တွေကိုဖတ်, ဒါကြောင့်အရင်းအမြစ်ယခင်ကအလှည့်၌နှစ်ဆ-converting မရှိဘဲမှန်ကန်သော output ကိုပြောင်းလဲလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, ဆိုလိုတာကပြောင်းလဲထားပြီးလျှင်သိတယ်။
အစား 23 input ကိုသတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်တစ်ဦး converter ထားရန်ရှိခြင်း၏, CMCM သာ output ကိုလမ်းကြောင်းများတစ်ဦးချင်းစီအဘို့တယောက် converter ကိုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် CMCM သာရှစ် Converter များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခဲ့ - လေးယောက်အသီးအသီးအဘို့တယောက် HD အင်တာနက်လိုင်းများနှင့်လေး SD က cable ကိုတီဗီလိုင်းများကိုအသီးအသီးအဘို့တယောက်။ အဆိုပါပေးဖို့ BBG-1002-UDX ရဲ့ Cross-ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းရည်အပြင်, ကလည်းတန်ဖိုးကဆက်ပြောသည်အသံ-Level စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် frame ကိုထပ်တူပေးပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းများအများပြည်သူ, ပညာရေးနှင့်အစိုးရအဆောက်အဦများတွင်သူတွေကိုကဲ့သို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်ထိရောက်သောနှင့်အကျိုးရှိစွာဖြေရှင်းနည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လယ်ပြင်၌ဖောက်သည်များကအစပျိုးအခွင့်အလမ်းများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ" ဘော့ McAlpine ၏ CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ် ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ်။ "ဘက်စုံသုံးဖြစ်ခြင်းအပြင်မီဒီယာထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များ CMCM မှာအရပျ၌ထားဘော့ Cross-converter ကိုအလုပ်အတွက်လိုအပ် converters အဖြစ်၏နံပါတ်လျော့ချ။ ဘော့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ဘက်စုံသုံးအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အမှုတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ "
အဆိုပါ stand-alone ပေးဖို့ BBG-1002-UDX high-သိပ်သည်းဆ openGear (R) ကဒ် module တစ်ခုအဖြစ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင် www.cobaltdigital.com.
ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် Inc ကဒီဇိုင်းများနှင့်ဆုရ 12G / 3G ထုတ်လုပ် /HDယင်းအသံလွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားပတ်ဝန်းကျင်ဘို့ / SD ကနှင့် IP-based ပြောင်းလဲခြင်း, terminal ကို, throwdown နှင့်မြင်ကွင်းစုံနည်းပညာ။ အဆိုပါ openGear (R) ပဏာမခြေလှမ်းတစ်ခုစတင်တည်ထောင်သူမိတ်ဖက်အဖြစ်, ကိုဘော့, openGear ဗီဒီယိုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအပိတ်-စာတန်းလိုက်နာမှုစောင့်ကြည့်ရေး, OB ထုတ်လုပ်မှု, မာစတာထိန်းချုပ်မှုအဖြစ် application များအတွက်အသံအပြောင်းအလဲနဲ့ကဒ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအပြည့်အဝအကွာအဝေးကမ်းလှမ်း HD သတင်းထုတ်လုပ်မှု, signal ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အသံကျယ်လောင်နှင့်အရောင်ဆုံးမခြင်း။ အင်တာဖေ့စ converter ကိုသေတ္တာများ၏ဘော့ရဲ့အပြာရောင် Box ကိုအုပ်စု (TM) လိုင်း 12G / 3G ၏ကျယ်ပြန့ streamlines နှင့်ရိုးရှင်းစွာ /HD/ SD ကနှင့် IP-based ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် signal ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ Multi-image ကိုခင်းကျင်းပြသပရိုဆက်ဆာအရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများစတူဒီယိုထဲမှာမြင်ကွင်းစုံစွမ်းရည်များနှင့်ဝေးလံခေါင်သီအသံလွှင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ enable ။ ကုန်သည်တွေ, System Integration နှင့်အခြားမိတ်ဖက်တစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကွန်ရက်ကတဆင့်ဖြန့်ဝေ, ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် ထုတ်ကုန်တစ်ခုငါးနှစ်အာမခံနှင့်အတူကျောထောက်နောက်ခံပြုနေကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.cobaltdigital.com မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Cobalt/Cobalt-BBG-1002.png
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: ဘော့ပေးဖို့ BBG-1002-UDX stand-alone Cross-Converter
အလည်အပတ် ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် အဆိုပါ 2017 မှာ NAB ပြရန်, Booth N3308
တွစ်တာပေါ်မှာ Share:twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]_tv% 20deploys%[အီးမေးလျ protected]%20Cross-Converter%20at%20Nonprofit%20Marin%20TV%20-%20https://goo.gl/9ZC95L
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ပေးဖို့ BBG-1002-UDX ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း CMCM ဘော့ ရပ်ရွာမီဒီယာစင်တာ လက်ဝါးကပ်တိုင် converter converting နှစ်ဆ Marin Marin တီဗီ NAB16 အကျိုးအမြတ်မယူ ပလေးအောက် 2017-03-31
ယခင်: အဖွဲ့ဝင်များ VidTrans17 မှာအောင်မြင်သောအော်ပရေးရှင်းအားထောက်ကူရည်ရွယ်
နောက်တစ်ခု: Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ DigiLink နှင့် InfinityLink အတူအိုင်ပီပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများအတွက်ထိရောက်မှုကိုတိုးပှားရည်ရွယ်